Mixels lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Hihaona tsy mahazatra ny firenen'i biby kely samy hafa loko. Asaina izy ireo hilalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Mikseli sy vonona ny haneho eny ny fahaizana mahagaga. Rehefa mifehy ny singa voajanahary, dia nanohitra Nikselyam - ny ela-andro fahavalo. Raha toa ianao ka manontany tena momba ny fahaizany mifehy ny afo, ny rano, vy sy ny ranomandry, jereo, inona no izy hiray hina. Amin'ny Lego singa dia haingana disassembled sy reassembled amin'ny filaharana hafa. Araka ny fandehany havaozina ho tanteraka amin'ny fahaiza-manao vaovao, vonona ny fanazaran-izy, mitsoka ny baomba sy ny ady.
Lalao Mikseli tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Mixels lalao
Ankehitriny dia afaka hilalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Mikseli tsy mijery ny fampisehoana
Lalao Online Rehetra Mixels lalao
V MIXELI ny lalao dia tsy milalao afa-tsy smile
Ny tontolo fanta-paritra dia manitatra ny sisin-taniny amin'ny fanekena ireo zavamahadomelina vaovao. Eo anatrehanao lalao Mikkseli miaraka amin'ireo ankizy tsy misy hentitra, manaitra, mampihomehy ary mampihomehy. Hatramin'ny naha-mponina ao amin'ny firenena mahagaga azy ireo dia vonona ny hampiseho ny talentany manokana ihany koa izy ireo. Ny tsirairay dia afaka mifehy singa iray:
Koa iza amin'ireo foko no mora foana, satria samy hafa ny lokony. Sariaka sy tia mampiray izy ireo hamorona zavatra vaovao. Noho izany dia lasa matanjaka kokoa izy ireo hanohitra ny Nixels amin'ireo fahavalony, izay tsy afaka mitsangana amin'ny fialamboly sy fihomehezana. Mendrika ny hanomboka ny Mixels, satria ny Nixels dia manao ny zavatra rehetra hanelingelina ireo sombiny miloko.
Manao karazana foko inona izy ireo?
Mixels amin'ny lalao dia noforonina ao amin'ny andiany"Mixeli", nalaina tao amin'ny studio Cartoon Network. Raha ity tsikera mampihomehy ity no tsy hitanao, fotoana izao hahafantaranao ireo karazan'olona ary hianatra ny fomba hahafantarana ny foko.
Glorp Corp. foko marefo, marefo sy maitso marevaka, voahodidin'ny dibera maloto sy algë.
Mancho mendri-piderana mihosin-koditra miloko marevaka mandrakizay. Miresaka amin'ny vavany feno sakafo foana izy ireo, ary raha tsy te-hilavo lefona ianao, dia mialà eo amin'ny vava izay mivoaka avy amin'ny vava.
Ao amin'ny foko Veldo, ireo mpahay tsiambaratelo mena dia nivory mba hanamboatra sy hamorona rafitra misy vy sy vato.
Clinkers dia mamorona hevitra mahasoa.
Frostikons ny andriambin'ny gilasy.
Lixers amin'ny fiteny lava dia manandrana manandrana tsiro vaovao.
Glukis miaina anaty lava-bato, mamirapiratra ao anaty haizina amin'ny masony.
Infernites dia tena mahaleo tena. Tsy fantatra izy ireo, hifehezany ny afo ary tsy matahotra ny hafanana ambony.
Orbitons mpikaroka planeta vaovao. Manana fitaovana rehetra ilainy amin'ny toerana izy ireo, saingy noho ny herimpo sy ny fahantrany dia tsy nianatra ny fomba fitantanana izany.
Mahafinaritra ny mpilalao ary mihevitra izy ireo fa mahafatifaty sy mavomavo, saingy eo amin'ny sehatra dia rakotra kisoa.
Fang Ganges no malaza noho ny fitiavan-tenany tsy misy fitiavan-tena.
Mitahotra fotsiny ny mpandeha raha hijery, fa mandritra ny olom-pantany dia gaga izy ireo amin'ny fahaiza-misaina sy ny saina manontany.
Cragsters dia nandatsaka avy amin'ny toeram-pitrandrahana madinidinika, tsotra.
Miara-mipetraka amin'ny tilikambo eny an-tendrombohitra akaikin'ny hainkintana ny electrodes mba hoentina amin'ny tselatra.
Nixels no biby mampidi-doza indrindra amin'ny fironana hanimba ny zava-drehetra. Maneso azy ireo indrindra rehefa mahavita mamorona hery vaovao ny Mixels maromaro. Mba hisakanana azy, te-hanafina sy handrava ny Kubits izy ireo.
Mixeli sahirana amin'ny zavatra?
Ny karazana tsirairay dia afaka mahatakatra sy mamerina indray, ary rehefa misy maromaro amin'izy ireo dia manova ireo singa eo amin'ny toerana, ary manana zavaboary tsy manam-paharoa isika miaraka amin'ny fahaizana tsy mahazatra, satria ny lalao Lego Mixeli. Mialà eo ambany fiarandalamby ambanin'ny tany mba hahalalazana ny ambany, hamotika kankana ary hahita harena. Ary ny lalao Mixeli dia feno dinamika, satria mila mamonjy namana ianao, manamboatra zavatra ary manangana rafitra fiarovana.
Mitantana tarehin-tsoratra, tsindrio ny bokotra misy ny bokotra ary ampiasao ny totozy mba hanampy azy ireo hitsambikina, hanangona asa-bonus mandritra ny asa. Ny zanaky ny lalao Mixeli dia milalao noho ny fisehoan-javatra mahazendan'ny mponina ao amin'ny firenena mahagaga sy ny loko izay iaingany.
Lalao Muxeli maimaim-poana, izany dia asa mahaliana foana izay ahafahanao mifehy ny robots; Manangona sehatra angovo; Asehoy ny herim-po, ny fahamendrehana ary ny fahamarinany, mitifitra ireo bibikely feno fankahalana na manangona ny lokon'ny loko ary mandeha amin'ny mozikan'ny planeta.